नेपाल आज | डाक्टरनै नभएको नोवेल अस्पताललाई मिर्गौला प्रत्यारोपणको लाइसेन्स !
समाचार अपराध सुरक्षा स्वास्थ्य
स्वास्थ्य मन्त्रालयले मोरङ्गको विराटनगर–५, कञ्चनवारी स्थित नोवेल शिक्षण अस्पताललाई मापदण्ड विपरित मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि लाइसेन्स दिएको पाईएको छ। विभिन्न मेडिकल कलेज किनेर अकुत सम्पत्ति कमाएका मेडिकल माफिया सुनिल शर्माले पैसा र पावरको भरमा कलेजमा मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा सुरु गर्न लागेका हुन ।
स्रोतका अनुसार नोवेलमा मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा प्रदान गर्ने नियमित चिकित्सक/डाक्टर छैनन् । तर, पनि पनि राजनीतिक र आर्थिक पहुँचको भरमा उनको नोवेल मेडिकल कलेजलाई मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि लाइन्सेन्स दिएको स्रोतको दावी छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा लाइसेन्स वितरणको लागि एउटा समिति छ। त्यसमा निजी अस्पतालमा लगानी भएका भक्तपुरको मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर प्रेम ज्ञवाली सदस्य छन। ज्ञवाली त्रिवि शिक्षण अस्पतालको जागिर हुँदाहुँदै ग्राण्डी अस्पतालमा लगानी गर्न पुगेका सरकारी डाक्टर हुन । त्यही लगानीका कारण शिक्षण अस्पतालभन्दा पनि ग्राण्डीमा बढी काम गर्ने डा. ज्ञवाली अहिले पनि ग्राण्डीको प्रत्यारोपण विभागको प्रमुखको रुपमा कार्यरत रहेका छन् ।
यो उनी प्रति नैतिकमात्र होइन कानूनी प्रश्न पनि हो । स्वार्थ बाझिने गरी काम गर्ने उनलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले संरक्षण गरेको छ । तिनै डाक्टरको वहकाउमा परेर मन्त्रालयले अहिले नोवेललाई मापदण्ड विपरित मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि लाइन्सेन्स दिएको आरोप छ।
मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि लाइन्सेन्स दिने समितीको अर्को सदस्य हुनु, त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानकी डिन दिब्या सिंह शाह। उनी तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निजी चिकित्सकका रुपमा काम गरेकै कारण त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानकी डिन वनाईएकी हुन । ज्ञवाली र सिंहसहितको त्यही टोलीले शर्माको मेडिकल कलेजलाई मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवाको समेत लाइसेन्स दिएको स्रोत बताउछ ।
स्रोतका अनुसार, नोवेललाई करिब एक महिनाअघि मिर्गौला प्रत्यारोपणको लाइसेन्स दिएको हो। यसै हप्ताबाट मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा सुरु गर्ने भनिएको छ । मिर्गौला प्रत्यारोपण लाइसेन्स लिनका लागि स्थायी रुपमा मिर्गौला प्रत्यारोपणमा संलग्न हुने डाक्टरहरू हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, नोबेल मेडिकल कलेजले त्यो व्यवस्था नहुँदै लाइसेन्स पाएको स्रोतको दावी छ । मिर्गौला प्रत्यारोपणको लाइसेन्स दिन डा. ज्ञवालीको विशेष सक्रियता रहेको समेत जनाईएको छ। नोबेलमा पुगेर मृगौला प्रत्यारोपण गर्न सहयोग गर्ने टोलीमा डा. ज्ञवाली पनि रहेका थिए । डा. ज्ञवालीको टोलीले नोबेललाई मिर्गौला प्रत्यारोपणको लाइसेन्स दिलाउनुअघि नोबेलकै एकजना डाक्टरलाई डा. ज्ञवालीले मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा तालिम दिलाएको दावी स्रोतको रहेको छ ।
६ महिनाका लागि तालिममा आएको भनिए पनि ती डाक्टर मुस्किलले १ महिना मिर्गौला प्रत्यारोपण केन्द्रमा आएर बसेका थिए । त्यही आधारमा मिर्गौला प्रत्यारोपणको लाइसेन्स नोबेलले पाएको स्रोत बताउछ ।
सरकारी अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक हुने निजी अस्पताललाई पोस्ने काम गरिरहेको आरोप खेप्दै आएका डा. ज्ञवालीको टोलीले नोबेललाई दक्ष चिकित्सक र जनशक्तिविना नै लाइसेन्स दिनुले अर्को गम्भीर परिस्थितिको निर्माण भएको छ । देश र जनताको भन्दा पनि ब्यक्तिगत स्वार्थ मात्र हेर्ने गरेकै कारण डा. ज्ञवाली र शर्मा मेडिकल माफियाको आरोप लाग्दै आएको छ।
दुवैको मिलेमतोमा नोवेलले मृगौला प्रत्यारोपणको अनुमती पाएपछि विरामीको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड हुने आशंका बढाएको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
मेडिकल माफिया सुनिल शर्माको सर्टिफिकेट नक्कली
‘मेडिकल माफिया’ सुनिल शर्माले धरानको बिपी प्रतिष्ठान डुबाए
सुनिल शर्माको बिराटनगर स्थित नोबेल ज्यानमारा अस्पताल !
सुनिल शर्मा नोवेल शिक्षण अस्पताल मेडिकल माफिया मिर्गौला प्रत्यारोपण प्रेम ज्ञवाली